Habka Anshaxa ee Suuqgeynta Ganacsiga Ecommerce | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Habka Anshaxa ee Suuqgeynta Ganacsiga Ecommerce
Habka Anshaxa ee Suuqgeynta Ganacsiga Ecommerce
Waxaa laga yaabaa 28, 2019
Nidaam suuqgeyneed oo habaysan ayaa u horseedi kara korriin mustaqbalka fog ah. Nidaamku wuxuu u shaqayn karaa sida liiska hubinta maalinlaha ah.
Habka iyo hababka wadista taraafikada goobta ecommerce iyo beddelka waa caddahay. Suuqgeeyayaasha ku jira ganacsiga ecommerce-ka dhexdhexaadka ah iyo meheradaha tafaariiqda ee omnichannel waxay yaqaaniin xeeladaha lagu shaqaaleysiiyo. Markaa caqabada lagu kobcinayo ganacsigu inta badan waa edbin - maaha aqoon.
Ka fikir badashada talooyinka caadiga ah ee subaxda. Ka raadi Google ama Bing "caadada subaxda," oo waxaad ka heli doontaa talooyin ka yimid boqolaal aqoonyahanno wax soo saar leh. Badanaa talooyinkan waxaa ka mid ah akhrinta, jimicsiga, ama xitaa fekerka iyo tukashada.
Ujeeddadu waxay tahay ka hor inta aanad qaadin caqabadaha maalinta, waxaad u baahan tahay inaad aasaas u dhigto. Dareen ahaan, hawl maalmeedka subaxdu waxay la mid yihiin anshaxa suuq-geyneed ee lagama maarmaanka u ah in si joogto ah loo kobciyo loona horumariyo ganacsiga.
Kobaca taraafikada waxay noqon kartaa mid cajiib ah in la daawado. Ka fikir goob cusub oo ecommerce ah. Waxay leedahay eber booqdayaal. Milkiilaha goobta ayaa xayeysiis u galiyay Google ama Facebook, todobaad gudihiis waxaa jiray 100 qof oo dukaameeystayaal ah oo indha indheeyay alaabada dukaanka.
Dhowr toddobaad gudahood, 100 booqdayaasha toddobaadlaha ah waxay noqon karaan 1,000 ama 1,500. Kordhin kasta oo yar ayaa loo dabaaldegaa, taas oo ku dhiirigelisa suuq-geynta shirkadda inay kaxeeyaan taraafikada goobta, si kastaba ha ahaatee korodhka yar.
Laakiin hawlgalka ecommerce-ka dhexdhexaadka ah, kobaca taraafikada wuxuu u ekaan karaa mid aan faa'iido lahayn.
Tixgeli tusaale ahaan shirkad toos ah oo macaamiisha ah oo hesha tobanaan kun oo booqasho bishiiba ah shabakadeeda. Kooxda suuqgeyntu waxay kordhiyeen taraafikada raadinta Google-ka 6,000 ee booqashooyinka Abriil 2019 marka loo eego sannadkii hore. Kobaca ayaa mahad iska leh olole suuqgeyneed oo guulaystay, kaas oo wakhti qaatay in la horumariyo oo la bilaabo.
Laakin warka 6,000 ee martida dheeraadka ah ayaa lagu qaabilay hamaansi. Waxa dareemi lahaa sida ku guuleysiga Super Bowl ee bilawga waxay ahayd horumar yar oo kaliya ee shirkaddan dhexdhexaadka ah.
Si aan ula kac ahayn, maamulka ganacsiyada ecommerce qaarkood waxay qaddarin karaan kobaca taraafikada ee joogtada ah taas beddelkeedna waxay uga soo kaban karaan mashaakil una guuri karaan mashaakil.
Isla cabbirka dhexe, shirkadda tooska ah ee macaamiisha e-commerce ee si dhib yar u ogaan 6,000 booqdayaasha goobta dheeraadka ah bishii Abriil dhawaan waxay ku boodeen qaab argagax leh markii seddex dukaameeyste ay su'aal la mid ah badeecada ku qabteen 24 saacadood.
Shirkaddu waxay soo saartay dhowr shay oo cusub oo ay kaga duwan tahay farsamada inteeda kale. Saddex qof oo dukaameystayaal ah ayaa waydiiyay su'aal ku saabsan dhinac kala duwanaanshahan.
Agaasimaha Adeegga Macaamiisha ee Shirkadda oo helay dhammaan saddexda su’aalood, ayaa farriin Slack ah u diray guud ahaan shirkadda kaga warramay xaaladda.
Wax yar ka dib dadka ka socda hawlgallada, naqshadaynta alaabta, iibinta, iyo xitaa kooxda maaraynta agabka ayaa bixinayey talooyin, sida fariimo suuqgeyneed taxane ah, xayaysiisyo, buug ebook ah, iyo qayb cusub oo mareegaha. Maamulaha guud iyo COO ayaa ka qayb qaatay.
Dhammaadkii, kooxda suuqgeyneed ee shirkadu waxay soo saareen qoraal ku saabsan mawduuca waxayna ku daraan boostada warsidaha nuxurka toddobaadlaha ah. Boostada balooggu waxay ahayd xidhiidhka ugu caansan ee warsidaha, isaga oo ka soo ururiyay wax ka yar 100 dhagsi oo ka yimid dhagaystayaal 60,000 ah.
Dadaalka, si kastaba ha ahaatee, waa la dabaaldegay. Kooxda suuqgeyntu waxay heshay ammaan ku aaddan ficilkeeda degdegga ah. Iyo, si dhab ah, shirkaddu guud ahaan waxay ku dhiirigelisay suuqgeynteeda inay fiiro gaar ah u yeeshaan dhibaatooyinka xilligan, iyagoo iska indhatiraya anshaxa muhiimka ah ee koritaanka korodhka.
Caadooyinka suuq-geynta qaarkood waa in si joogto ah loogu dhaqmaa, haddaysan ahayn maalin kasta. Laakin way fududahay in laga danaysto horumarada muhiimka ah, ee kordheysa, beddelkeedana, laga jawaabo dhibaatooyinka degdega ah.
Hal dariiqo oo lagu xalin karo khilaafkan waa nidaam suuqgeyneed oo habaysan. Waa tan soo jeedintayda agaasimaha suuqgeynta ee hawlgalka ecommerce-ka dhexdhexaadka ah si uu u fuliyo subax kasta ka hor akhrinta iimaylka, hubinta fariimaha Slack, ama ka jawaabista cadaadiska maalinlaha ah.
Nidaamku wuxuu u shaqeeyaa sida liiska hubinta. Fuli hawl kasta.
Ku akhri buug 20 daqiiqo ah. Dooro buug ganacsi ama warshad la xidhiidha, oo akhri ugu yaraan 20 daqiiqo maalin kasta. Waqti ka dib, wax badan ayaad baran kartaa.
Akhri wararka warshadaha 20 daqiiqo. Akhrinta maqaalkan waxay tusaale u noqon doontaa waxa la sameeyo inta lagu jiro wakhtigan. Hawshan, Feed.ly waa saaxiibkaa.
Dib u eeg yoolalka shirkadda U fiirsashada yoolalka maalinlaha ah waxay caawisaa in la xafido oo la dhex dhigo.
Dib u eeg KPI-yada Inkastoo aysan macno samaynayn in maalin kasta la eego tilmaame kasta oo hawlqabad oo muhiim ah, waxay macno samaynaysaa in si joogto ah dib loogu eego. Tixgeli inaad beddesho KPI-yada gaarka ah si aad u hubiso maalin kasta.
Ogow waxa ay kooxdaadu ka shaqaynayso. Tallaabadan, dib u eeg oo kala hormari hawlaha Trello ama kuwa la midka ah. Fiiri liiska hawshaada. Waa maxay waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad sameyso maanta? Maxaa intaas ka dib?
Qabo hawshaada ugu muhiimsan. Kahor intaadan akhriyin hal email, samee waxa la sameeyo.
Shayada liiska hubinta ku jira ayaa ka muhiimsan anshaxa kala hormarinta, ka hor inta aan cadaadiska maalinta kaa mashquulin korriinka shirkadda.
Wax kasta oo aan u maleyneyno inaan ka ognahay iOS 13 ee iPhone
Sida loo sameeyo iPhone-kaaga u akhriyo qoraal kasta
Sare u qaadida gaarsiinta iimaylka sanadka 2022